अल्वर्ट आइन्स्टाइनको जीवनीको विश्लेषणात्मक अध्ययन Nepalpatra अल्वर्ट आइन्स्टाइनको जीवनीको विश्लेषणात्मक अध्ययन
पृष्ठभूमि : दृढ संकल्प, अदम्य साहस, कठोर मिहेनत तथा निरन्तर अभ्यासद्वारा विलक्षण प्रतिभका धनी व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित हुनु भएका अल्वर्ट आइन्स्टाइन वीसौं शताब्दीका शिखर पुरुष हुन् । संसारमा केही यस्ता व्यक्ति जन्मन्छन्, जसको असाधारण प्रतिभा र योगदानले विश्व र मानव समाजमा अमिट छाप छाडेको हुन्छ । उनले विश्वलाई मानव दृष्टिकोणमा जुन प्रकारको परिवर्तन ल्याए, त्यस्तो अरू कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले आजसमम् ल्याएका छैनन् । उनले विज्ञानको क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वको राजनीति, धर्म, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याए ।
आइन्स्टाइन एक महान् भौतिकशास्त्री मात्र नभई एक ठूला चित्नक, आदर्शवादी, दार्शनिक, परोपकारी अन्तराष्ट्रिय सद्भावनाका पक्षपाती राजनेता पनि थिए । जुन कुराहरूको मूल्याड्ढन गर्दै प्रसिद्ध अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिाका “टाइम” ले आइन्स्टाइनलाई २० औं शताब्दीका “शताब्दी पुरुष छानेको थियो ।
उनी एक महान् भौतिकशास्त्री मात्र नभई एक ठूला चित्नक, आदर्शवादी, दार्शनिक, परोपकारी अन्तराष्ट्रिय सद्भावनाका पक्षपाती राजनेता पनि थिए । जुन कुराहरूको मूल्याड्ढन गर्दै प्रसिद्ध अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिाका “टाइम” ले आइन्स्टाइनलाई २० औं शताब्दीका “शताब्दी पुरुष छानेको थियो । उनका सापेक्षतावाद सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा त्यसलाई बुझ्ने मानिस विश्वभरी एक दजर्न मात्र थिए । भनिन्छ । उनलाई अहिलेसम्मको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानव मस्तिष्क भएको मानिसको रूपमा चिनिन्छ ।
आइन्स्टाइनका सापेक्षतावाद सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा त्यसलाई बुझ्ने मानिस विश्वभरी एक दजर्न मात्र थिए । भनिन्छ । उनलाई अहिलेसम्मको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानव मस्तिष्क भएको मानिसको रूपमा चिनिन्छ ।
जन्म र पारिवारिक पृष्ठभूमि
अल्वर्ट आइन्स्टाइनको जन्म मार्च १४, १८७९ मा जर्मनीमा भएको थियो । उनका पिता हरमन र आमा पाउलिने कोच आइन्स्टाइन दुवजै यहुदी थिए । सन् १८८० मा व्यवसायको सिलिसिलामा उनी सानै देखि संगीतमा औधी रूचि राख्थे । उनले ६ वर्षको उमेरमा आÇनी आमबाट भ्वायलिन बजाउन सिक्ेका थिर्ए । उनकी आमा पाउलिन आइन्स्टाइन संगीतकी एक त्राता आइन्स्टाइनको परिवार अल्मबाट म्यूखिन बसया स¥यो । उनका बुबा हरमन र काका ज्याक जेकन आइन्स्टाइन दाजुभाई मिलेर म्यूनिखमा विद्युत यन्त्रको बिक्री वितरणको व्यवसया खोलेका थिए । मूनिखमा नै आन्स्टाइनको बालककाल शुरू भयो । तेह्र वर्षको उमेरसम्म उनले सधै घरमा भ्वायलिन सिक्ने र यहुदी धर्मसम्बन्धी प्रचवन सुन्ने गर्थे । आइन्स्टाइनलाई उनका बुबा हरमन आइनस्टाइनले औधी माया गर्थे ।
शिक्षा, जागिर र प्राध्यापन
सन् १८९४ मा उनको परिवारमा विद्युतयन्त्रमा व्यवसया टाट पल्टियो । त्यसैले आन्स्टाइनको परिवारले म्इुखिन छोडी इटालीको मिलान शहरमा बसाइ सर्ने निर्णय गर्यो । सन् १८९५ मा स्वअध्यनय गरेर म्यूरिच (स्विटजरल्याण्ड) को संघीय प्रविधि संस्थान (Federal Institute of Technology) मा प्रवेश परीक्षामा असफल भएपछि आफ्नो भविष्यका योजनाबारे एउटा निबन्धमा त्यस समयमा उनले लेखका थिए “यदि मेरो भाग्य बलियो छ भने म स्वीस संघीय विद्यालयको परीक्षा पास गर्नेछ । त्यहाँ म चार वर्षसम्म गणित र भौतिकशास्त्र अध्यनय गर्नेछु । अन्ततः इन्जिनियरिड्डको मोह त्यागी आराएको स्कूलमा एक वर्ष पढेपछि स्वीस संघीय बहु प्राविधिक विद्यालयमा गणित र भौतिकशास्त्र पढ्न भर्ना भए ।
यदि उनी इन्जिनियरिड्ड प्रवेश परीक्षामा सफ भएमा भए विश्वले महान् वैज्ञानिक तथा भौतिकशास्त्री आइन्स्टाइन पाउने थिएनन् । सन् १९०० अगस्तमा स्नातकको परीक्षा पास गरे । सन् १९०१ मा उनले स्वीटजरल्याण्डको नागरिकता लिए । सन् १९०९ मा आफ्ना साथी मार्सेल ग्रोसमानका बुबाले उनलाई स्विटजरल्याण्डको एक शहर बर्नको एक पेटेन्ट अफिमास तृतीय श्रेणीको विशेषज्ञको पदमा जागीर दिलाई दिए । सन् १९०५ मा ज्यूरिच विश्वविद्यालयबाट पी. एच. डी उपाधि प्राप्त गरे । सन् १९०९ मा आइपुग्दा आइनस्टाइन विश्वमा एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
विवाह र पारिवारिक जीवन
विज्ञान जगतमा आइन्स्टाइनको योगदान
(ख) सापेक्षतावादको सिद्धान्त (Theory of Relativity)
यस सिद्धान्त अनुसार परमाणु (Atom) र अपपारमाणिक कणहरू (Sub-Atomic Particles) जहिले पनि जथाभावी वा दिशाविहीन (Random) तर नागवेली वा बक्र गति (Zig-Zaz Motion) मा घुमिरहेका हुन्छन् । यसरी घुम्दा एक वस्तुको अर्को वसतुसँग स्थिति स्थापक ढक्का (Elastic Collision) हुन्छ भन्ने हो ।
एक पटक उनलाई साँगुरो गल्लीबाट जानको लागि मानिसले तान्ने रिक्सामा बस्न अनुरोध गर्दा अस्वीकार गरी भनेका थिए : मानवलाई पशु झैं व्यवहार गरी त्यसमाथि सवार भएर जान मेरो नैतिकताले कदापी स्वीकार्दैन भन्दै ईश्वरप्रति उनको धारणा थियो : ईश्वर दयालु हुन सकछन् तर दुष्ट हुँदैनन् ।
ईश्वरप्रति आइन्स्टाइनको धारणा थियो : ईश्वर दयालु हुन सक्छन् तर दुष्ट हुँदैनन् ।
४. विज्ञान र विज्ञान सम्बन्धी उनको धारणा
उनले विज्ञानलाई जहिले पनि व्यवहारमा र सामाजिक जनजीवनमा उतार्नुपर्दछ भन्ने ठान्दथे । विज्ञान समाजभनाद टाढा हुनुहुादैन, बरू समाजमा एककार गर्नुपर्दछ भनी भन्दथे । सापेक्षतावादमा सिद्धानतलाई सरल भाषामा भनदथे : जब एक जना केटो सुन्दरी केटसिाग् गफगाफमा भुल्दछ, उसलाई एक घण्टा भनाद बढी समय लाग्दछ । सापेक्षतावादमा सिद्धान्त भनेको नै यही हो । शिक्षाको बारेमा उनको धारणा थियो : शिक्षाको साँचो उद्देश्य भनेको मानिसको मस्तिष्कलाई सोच्ने बनाउन तालिम प्रदान गर्नु हो । तसर्थ शिक्षा अमूल्य छ ।”
संसारमा विभनिन् ठाउँबा आएका कैयौं मानिसहरू उनलाई भेट्न आउँथे । उनी भ्याएसम्म सबैसँग कुरा गर्दथे । उनी राजनीतकि वहस गर्न खुवै रूचाउँथे । उनी भन्थे “मेरो जीवन समीकरण र राजनीतबिीच विभाजित छ । यसै प्रसंगमा एक पटक उनले भनेका थिए : राजनीति कर्ताहरूको लागि मात्र हो तर समीकरण अनन्त कालसम्म माथि छ ।
2. Christopher Caudwell:The Crisis of Physics.
3. Monthly Review, May, 1998 (May, 1000
4. Einstein: The Life and Tiems by Ronabd, ed. Clark.Avon Books, New York, 1072.
5. Out of My Later Years, New York: Philosophical Library, 1050.
6. Einstain on Peace, Edited by Otto Nathan and Heinz Norden, New York: Simon2Schuster, 1960.
7. Science & Future, Monthly Magazine
8. Science Infotech
आइन्स्टाइनको प्रकाश विद्युतीय प्रभाव
आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्त
आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त